Mpamatsy sy orinasa semi-mandeha ho azy - Mpanamboatra Semi Automatic China
16 × 24 T-shirt Fanaparitahana milina famindrana hafanana
Milina fanontam-pirinty hafanana izay azo ampiasaina hanindriana lobaka sy fitaovana hafa raha mbola fisaka izy. Miasa amin'ny alàlan'ny fampiasana herinaratra hanafana ny singa manafana eo an-tampony, ary rehefa ampidinina dia hanery ny T-shirt / fitaovana hafa ary hanao pirinty fanontana, plastisol, fingotra, ambony, taratasy famindrana, polyflex, sns mifikitra tsara amin'ny akanjon'ny lobaka .
70 × 90 Big Size Jersey Sublimation Double Worktable Heat Press Transfer Machine
70 × 90 Heat press machine izay azo ampiasaina hanindry lobaka sublimation, jersey ary fitaovana hafa raha toa ka fisaka ilay izy. Ny orientation sy ny toeran'ny locator dia azo ovaina ary tena marina tsara.Fifehezana mialoha ny mari-pana sy ny fotoana. Izy io dia endrika mahaolona ary mora ampiasaina.
Fitaovana manan-tsaina sy fampisehoana nomerika ny mari-pana sy ny fotoana, ny fandeferana ny mari-pana amin'ny famakiana dia + -2 ° C. Mora raisina, mora fandaharana ary mora ampiasaina. Raha manana tsindry an-jatony hatao ao anatin'ny iray andro ny fivarotanao dia ho fantatrao ny tombony atolotry ny mpanao gazety. Mampiasà ny ampahafolon'ny angovo toa ny mahazatra anao amin'ny gazety mahazatra dia hankasitrahanao ny ezaka mihena amin'ny sandrinao sy ny sorokao.
Milina fanontam-pirinty hafanana izay azo ampiasaina hanindriana lobaka sy fitaovana hafa raha mbola fisaka izy. Miasa amin'ny alàlan'ny fampiasana herinaratra hanafana ny singa manafana eo an-tampony, ary rehefa ampidinina dia hanery ny T-shirt / fitaovana hafa ary hanao pirinty fanontana, plastisol, fingotra, ambony, taratasy famindrana, polyflex, sns mifikitra tsara amin'ny akanjon'ny lobaka . Ity vokatra ity dia manana fiasa pneumatika ka afaka mamokatra tsindry mahery sy marina avy amin'ny compresseur rivotra.
Milina fanodinana hafanana lehibe Pneumatika
Ny milina fanodinana hafanana miaraka amin'ny fitaovana fiarovana azo antoka mba hialana amin'ny fahasimbana ary afaka manakana ny takelaka fanafanana hanindry rehefa misy zavatra tampoka. Mampiasà birao boribory mifangaro, switch elektromagnetika, famantaranandro mandeha, maharitra, azo jerena ary tena marina izy io. Ampiasaina betsaka hamokarana T-shirt, lamba fandokoana, sainam-pirenena, sora-baventy sns ny karazan-damba rehetra izay mila loko.
Ampiasao ny làlan-tsipika mihetsiketsika avo lenta, tsy miovaova izy, hita maso ary tena marina. Ny fizotrany dia fehezin'ny nomerika ary mampiasa famantarana famantarana ary ny angovo hafanana mizara salantsalany. Fitaovana mavitrika sy fampisehoana dizitaly ny mari-pana sy ny fotoana, ny fandeferana ny mari-pana famakiana izay + -2 ° C. Mora raisina, mora fandaharana ary mora ampiasaina.
Masoivoho miisa roa miova pneumatic press press dia fahombiazan'ny fanoherana hafanana 350 ° C tsy misy fanodikodinana, ny milina fanamoriana marika dia mety amin'ny fanontana sary famantarana lamba isan-karazany, misy vokany tsara.
Pneumatika rosin press press dia fahombiazan'ny fanoherana hafanana 350 ° C tsy misy fanodikodinana, ny milina fanamoriana marika dia mety amin'ny fanontana sary famantarana lamba misy famaritana isan-karazany, misy vokany tsara.